UKen Follet unosuku lokuzalwa. Imisho evela kumanoveli akhe adume kakhulu | Izincwadi Zamanje
UKen Follet unosuku lokuzalwa. Imisho evela kumanoveli akhe adume kakhulu
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, I-Novela
Ken follet wazalwa ngoJuni 5, 1949 ku Cardiff, Wales, futhi ngokuhamba kwesikhathi ube ngomunye wababhali edume kakhulu futhi efundwayo emhlabeni wonke. Ngoba bazoba mbalwa abantu abafayo abangazange bafunde Izinsika zomhlaba. Okwalabo abasala lapho ukukhetha kwami ​​imishwana kusuka Amanoveli akhe ayi-6 ngubani oyibeke lapho ikhona: a ireferensi yezincwadi zesimanje ezithandwayo.
1.1 Imisebenzi eminingi
2 Izinsika zomhlaba
3 Ukuwa kwemidondoshiya
4 Ubusika bomhlaba
5 Indoda yaseSt
6 Indawo ebizwa ngenkululeko
7 Indiza yokugcina
UFollet ungomunye walabo babhali abathi bazi kangcono ukufinyelela umphakathi jikelele. Ukwehlukanisa kalula noma okuphindaphindwayo ngezindaba zakho iziza zomlando nezwi le-folkloric, okungekho muntu ongamphika kwakhe ukufaneleka ekufinyeleleni labo bafundi (iningi) abangenankinga ngaleyo miqondo ezincwadini.
Bathathe indawo yala masonto kuthelevishini ukulungiswa kwe inoveli yakhe edume kakhulu, Izinsika zomhlaba. Kepha noma iziphi zalezo nguqulo zihlala zingaphumeleli emibhalweni yakhe yasekuqaleni. Futhi yize impumelelo iphinde yaqinisekiswa ngezincwadi zakamuva, Bambalwa abake baba nomthelela emlandweni walokho kwakhiwa kweKingsbridge Cathedral yangenkathi ephakathi. Noma ukuqhubeka kwayo ku-trilogy, Umhlaba ongapheli y Ikholomu yomlilo nabo abakudluli.
I-trilogy ye- Ikhulu leminyaka eyenziwe nge Ukuwa kwemidondoshiya, Ubusika bomhlaba y Umbundu waphakade. Futhi kufana nokuningi Ukhiye ukuRebecca, In the target, High risk, Iwele lesithathu noma Emlonyeni kadrako. Lokhu ukuhlanganiswa kwemishwana labanye babo.
Ngikuthanda njengesivunguvungu, njengengonyama, njengentukuthelo enganqandeki.
UPhilip wabona ukuthi, empini yombango, ukulimala kokuqala kwaba ubulungiswa.
Isifungo ngamazwi kuphela! Akunalutho uma kuqhathaniswa nalokhu. Lokhu kungokoqobo, lokhu nguwe nami.
Ukwenza isifungo ukubeka umphefumulo wakho engcupheni, wayevame ukusho. Ungalokothi uthathe isifungo ngaphandle kokuthi ukhetha ukufa kunokuba usiphule.
Abantu abadala ababili abathandanayo kufanele bakwazi ukwenza izinqumo ndawonye, ​​ngaphandle kokulalelana.
Amandla okulalela abantu abakhaliphile abangavumelani nawe yithalenta okunzima ukulithola.
"Cha, ngeke ngithuke iNkosi uFitzherbert noma uMnu. Perceval Jones," esho ekhomba izigqoko ezimbili eziphezulu ngaphambili. Ngimane ngithi: Madoda, niwumlando.
U-Erik wayengomunye walabo bantu ababengakwazi ukwesaba impilo kangangoba bancamela ukuhlala bephethwe yinsimbi futhi batshelwe ukuthi benzeni futhi bacabangeni nguhulumeni ovuma ukuthi awunampikiswano. Babeyiziphukuphuku futhi beyingozi, kepha babebaningi abafana naye.
Kungcono ukuhlupheka ngemiphumela yobubi kunokuhlala unganyakazi ungenzi lutho.
Uma ungazibandakanyi, okwenzekayo yiphutha lakho.
Ubudlelwano bothando abufani nobokukhonza. Kukhulekelwa unkulunkulu. Bangabantu kuphela abangathandwa. Uma sikhonza umuntu wesifazane asikwazi ukumthanda. Bese kuthi lapho sithola ukuthi akasiye unkulunkulu, siyamzonda. Kuyadabukisa lokho.
Indawo ebizwa ngenkululeko
Udokotela wabeka izandla zakhe emathempelini akhe futhi wezwa kancane ngeminwe yakhe.
-Uthando nomshado kuyangidida, kodwa yingakho ikhanda lami libuhlungu.
Wayazi ukuthi izinkundla zemidlalo yaseshashalazini nemidlalo yokudlala ikhona, kepha wayengakaze acabange ukuthi kungaba into efana nalokho amehlo akhe akubonayo njengamanje: ukushisa, intuthu yamalambu, imvunulo yesikhathi esihle kakhulu, ubuso obudwetshiwe, nalolo daba. Ngaphezu kwakho konke, umzwelo… Intukuthelo, uthando olunothando, umona nenzondo bekumele ngokugqamile kangangokuba inhliziyo yakhe yashaya esifubeni sakhe ngomuzwa ofanayo abengaba nawo ukube konke lokhu bekwenzeka ngeqiniso.
Ngomehluko kuphela ngaleso sikhathi ebesingahamba kuwo wonke umhlaba ngamakhanda ethu aphakanyisiwe, esikhundleni sokuwehlisa njengophawu lwehlazo.
Sicabanga ukuthi sibhekene nenkinga, kepha asazi incazelo yegama.
Umsunguli wenkolo yobuKristu naye wabangela inkathazo enkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UKen Follet unosuku lokuzalwa. Imisho evela kumanoveli akhe adume kakhulu
IsiLatin: ubaba wezothando
Ungayibhala kanjani inoveli: ukudala abalingiswa